Shan degmo oo ka tirsan Galgaduu oo loo dayactirayo xarumihii dowladda Hoose – idalenews.com
Dowladda Soomaaliya ayaa biloowdey mashruuc balaaran oo ku kacaya 1.2 malyuun oo doolar kaasi oo dib loogu hawlgalinayo xarumo muhiim ah oo dowladda hoose leedahay oo ku yaala shan degmo oo ka tirsan gobolka Galgaduud.
Qorshaha waxaa hirgalineysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka, waxaana maalgainta leh hey’adda samofalka Maraykanka ee USAID, iyada oo maamulka Ahlu Sunnah ee dowladda taabacsan ay kormeeri doonaan, hubina doonaan sida ay hawsha u socoto.
Degmooyinka waxaa ka mid ah Dhuusamareeb, Guriceel, Balanbale,Caabudwaaq iyo Xeeraale, halka labada degmo ee gobolka kasoo hartay sida Ceelbuur iyo Ceeldheer aysan ka faa’iideysan doonin mashruucani maadaamaa ay Shabaabka gacanta ku hayaan.
Dhuusamareeb oo kale waxaa loogu talogalay 4 boqol oo kun, waxaana loo dhisayaa Maxkamada gobolka, xarunta dumarka, iyo garoomada ciyaaraha, Balanbale waxaa loo dhisayaa dugsi sare, halka Caabuq Waaq loo dhisayo xarunta dumarka. Xeeraale waxay heleysaa Suuq, horeyna waxaa loogu dhisey iskuul, halka Guri Ceel ay heley xarun dumar iyo garoon kubadda cagta ah.
Hal milyan ayay bixineysaa USAID, halka labada boqol ee kun ee doolar ee soo hartay uu bixinayo maamulka gobolka Galgaduud ee Ahlu Sunnah Wal Jameeca iyo dowladda Soomaaliya.
Hawlahan dib u dhiska qaranka ayaa waxa ay qeyb ka yihiin dowladda Soomaaliya oo maamulkeeda gaarsiineysa gobolada dalka.